यी ४ राशि भएका मानिसहरुको हुन्छन् सबैभन्दा धेरै दुश्मन तपाइको कुन ? - Charchit Entertainment!
Home bjob fnews यी ४ राशि भएका मानिसहरुको हुन्छन् सबैभन्दा धेरै दुश्मन तपाइको कुन ?
यी ४ राशि भएका मानिसहरुको हुन्छन् सबैभन्दा धेरै दुश्मन तपाइको कुन ?
ज्योतिष शास्त्र अनुसार १२ वटा राशीहरुमध्ये हरेक राशीहरुको जन्म समय अनुसार फरक फरक भाग्य रहन्छ । किनभने आफु जन्मेको समयले ज्योतिषीहरुले पनि भविष्यवाणी गर्दछन् । जसले गर्दा आफ्नो राशीअनुसार कसैको धेरै दुश्मन हुन्छ भने कसैको धेरै मित्र हुन्छ । आज तीमध्येको सबैभन्दा धेरै दुश्मन भएको राशीको बारेमा बताउदै छौँ । हेर्नुस्
मेष राशी हुने मानिसहरुको सबैभन्दा धेरै दुश्मन हुन्छन् । किनभने यो राशी भएका मानिसहरु अन्य राशीहरुभन्दा फरक सोच र प्रतिभाका हुन्छन् । जसले गर्दा विचार नमिलेपछि धेरै दुश्मन भइदिन्छन् ।
कर्कट राशीको मानिसहरु बढी रिसाहा हुने भएकाले यो राशीको पनि बढी मित्र भन्दा पनि दुश्मन हुन्छन् । तर उनीहरु ब्यवहारमा खुला दिलका हुन्छन् । मनमा लागेको कुरा खुला रुपमा भन्छन् ।
मकर राशी हुनेहरुको पनि मित्रभन्दा बढी दुश्मन हुन्छन् । किनभने यो राशी भएका मानिसहरु आफ्नै नयाँ सोच र प्रतिभाको हुन्छन् । त्यसैले सहीको कुराको सर्मथन र गलतको कुरा जहिल्यै विरोध गर्दछन् । तर अन्य राशीहरु यस्तो कुरा गर्न डराउने भएकाले मकर राशीसँग कुरा मिल्दैन् ।
वृश्चिक राशि हुनेहरुको पनि अरुको रिस गर्ने र अरुलाई दबाउन खोज्ने बानी ब्यवहारको कारण धेरै दुश्मन हुन्छन् । किनभने यो राशी भएका मानिसहरु धेरै ठुल ठुला कुरा गर्ने तर काम भने कम मात्र गर्दछन् ।